Boko Haram oo Afduubatay Xaaska Cayaaryahan Caan ah | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Boko Haram oo Afduubatay Xaaska Cayaaryahan Caan ah
Wararka ka imaanaya dalka Nigeria ayaa sheegaya in kooxda kadagaalanta dalkaas ee Boko Haram ay afduubteen Xaaska Cayaaryahan dheela Kubada Cagta oo lagu magacaabo Fegor Ogude.
Gabdhaan ay Afduubteen Jabhada Boko Haram ayaa Xiligii Fasaxa Waxa ay soo aaday qoyskeeda oo degan halka loo yaqaan Warri oo ah Magaalo ku taala dalka Nigeria kadibna waxaa afduubtay Niman Hubeysan oo markii dambe la ogaaday in ay katirsanyihiin Boko Haram.
Cayaaryahanka Xaaskiisa la afduubtay ayaa Waxa uu hada u dheela Naadiga Amkar Perm oo dheesha Horyaalka Russian Premier League Waxaana Xidigaan hada uu u soo duulay dalkiisa si uu Wadahadal ula galo Boko Haram.
Booliska Magaalada Warri ayaa Xaqiijiyey in Boko Haram ay gacantooda gashay gabadha Lagu magacaabo Maimunat Ogude oo ah xaaska Cayaaryahanka Xulka qaranka Nigeria ee Fegor Ogude Waxaana lageeyey Xaaska Xidigaan meel u jirta Magaalada laga Afduubtay 18.6 miles Lamana oga in Jabhadani ay Madax Furasho Lacageed doonayaan iyo in ay dili doonaan Xaaska Cayaaryahanka.
Maareeyaha Cayaaraha kooxda dalka Ruushka ee Amkar club, Denis Maslov,ayaa shegay in ay aad uga Xunyihiin Afduubka loo geystey Xaaska Cayaaryahankooda oo uu sheegay in ay dalkooda Fasax u aadeen isaga oo balan qaaday in ay Garab istaagi doonaan kuna bixin doonaan Wax kasta oo loo baahanayahay si loo samata bixiyo nolosha Gabdha la Afduubtay.